Ogaden News Agency (ONA) – Guuldaradii uu Minneapolis kala tagay gumaysiga indhahaaga kaga bogo
Guuldaradii uu Minneapolis kala tagay gumaysiga indhahaaga kaga bogo
Xadgudubka iyo xasuuqa ka socda Ogadenya yaa duudsin kara? . Waxaa na soo gaadhay sawirada dadkii ka qaybgalay shirkii uu gumaysiga isugu yeedhay jaaliyada Itobiya ee daggan Mareykanka oo lagu qiyaso inay kor u dhaafayaan milyanka qof iyo jaaliyada S.Ogadenya. Shirkaa oo gumaysiga uu aad u soo abaabulay oo la doonayay in qurbajoogta looga gado mashaariic maalgashi, shacabkeenana loogu sawiro inay raali ka yihiin gumaysiga Itobiya ayaa guuldarro aan u horey ugu dhicin ku dhamaaday.
Waxaa farxad u ah dadka jecel xoriyadda iyo sinaanta shucuubta in shirkaa si caam ah loo qaadacay uu Wayaanaha ku doonayay inuu ku khaldo caalamka uguna muujiyaan inay yihiin xukuumad masuul ah oo shucuubta ku nool waxay ugu yeedhaan Itobiya ay u wada dhantahay.
Sawirada ay soo qaaday kaamiradda halgamaaga waxaa ka dhex muuqda 2ba ama 3ex dabadhilif inkaari ku dhacday oo Somali ah iyo dhowr iyo toban shaqaalahii safaaradda ah iyo inyaroo ah kuwa u ololeeya xukunka Wayaanaha.
Waxaa guul mudan jaaliyadda S.Ogadenya ee boqolaalka isugu soo baxay say ugu muujiyaan caalamka iyo xukuumadda Mareykanka xasuuqa uu Wayaanaha ku hayo shacabka Ogadenya, ee diiday in la duudsiyo dhibaatada lagu hayo shacabkooda.
Waxaa horey loo yidhi sawirka wuxuu la qiimi yahay 1000 erey sidaad darteed, qofka kasta siduu doono ha u macnaysto sharaf dhaca ka raacay gumaysiga Itobiya shirkaa oo kharash xoogan uu galiyay siduu u qabsoomi lahaa.